मोदीको छेउमा हात बाधेर उभिनु सिता दाहालको गल्ती हो ?::mirmireonline.com
असोज १ काठमाण्डौं । हरेक राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखको विदेश भ्रमणमा उनका हाउभाउ र गतिविधि अभिव्यक्तिप्रति ख्याल पुर्याईएको हुन्छ र चासो स्वभाविक हुन्छ ।
तर पटक पटक चर्चा भईरहने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी धर्मपत्नी सिता दाहालको चर्चा यस पटक दिल्ली पुगे पछि अलि बढी नै देखियो सामाजिक सञ्जालमा । कारण विपक्षी दलका र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सिता दाहालले प्रचण्डलाई छाडेर मोदीको छेउमा उभिएको र त्यसमा पनि हात बाधेर भनेर आलोचना गरेका छन् ।
तर आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता र समर्थक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने चीनीया राष्ट्रपति सि जिन पिङकी धर्मपत्नी तथा चीनकी प्रथम महिला पेङ लि यान , अमेरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामाकी धर्मपत्नी तथा अमेरीकी प्रथम महिला मिचेल ओबामाले मोदीकै छेउमा बसेर खिचेका तस्वीर प्रकाशित गर्दै प्रतिवाद गरीरहेका छन् । यो सामान्य प्रकृया एक राजनीतिक विवाद र प्रतिवादको रुपमा देखिनु राम्रो हैन ।
भलै सिता दाहालले मर्यादाक्रम अनुसार उभिने र हिड्ने प्रकृयामा अलि ध्यान देखाएको भए हुन्थ्यो । फोटो जसको छेउमा बसेर पनि खिच्न सकिन्छ , यसैको छेउमा बस्नु पर्छ भनेर कुटनीतिक आचार संहितामा लेखिएको छैन । परम्परागत प्रोटोकल फष्ट लेडी भन्नाले उनको कर्तव्य कार्यकारी प्रमुखको निजी पक्षहरुमा सहयोग पुर्याउनु हो ।
चीनीया राष्ट्रपति , अमेरीकी राष्ट्रपतिका धर्मपत्नीहरुले मोदीसग‘ वोडिएरै फोटो खिचेका छन् खै त्यसको विरोधमा कतै चर्चा सुनिएन , तर हाम्रो परम्परागत समाजको प्रतिफल सिता दाहालको तस्वीर समाचारै बनाउनु पर्ने विषय बन्यो । फष्ट लेडी भनेको कार्यकारी प्रमुखको झोला बोकेर उसैका छेउमा मात्र टासिएर बस्ने र हिड्ने भन्ने अर्थ लाग्नु हुदैन ।
त्यस कारण सिता दाहालको तस्वीरले यत्रो विरोध र आलोचनाको बिषय बन्नु सान्दर्भीक छैन । फष्ट लेडी अनौपचारीक मानार्थ उपमा भएकाले फष्ट लेडीले यो नै गर्नु पर्छ भनेर कुनै देशको सविधानले काम तोकेको छैन ।
अहिले पहिलो पटक अमेरीकाको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्धार हिलेरी क्लिन्टन अघि बढ्दै छिन् । र उनी पहिलो महिला अमेरीकी राष्ट्रपति बन्ने संभावना बढ्दै छ ।
हिलेरीको चुनाव प्रचारमा उनका पूर्व राष्ट्रपति तथा पति बिल क्लिन्टनले पिए जस्तै गरी सहयोग पुर्याईरहेको समाचार आईरहेका छन् ।
वासिङटन पोष्टमा प्रकाशित टिप्पणी अनुसार बिल क्लिन्ट पूर्व राष्ट्रपति भए पनि अब हिलेरी राष्ट्रपति भए उनी अमेरीकाको फष्ट मेन हुने छन् कि फष्ट मेल लेडी ? यस्ता चर्चा भए पनि क्लिन्टन हिलेरीका एक असल पति र असल अमेरीकी नागरिकको रुपमा सहयोगी बनिरहेका छन् ।
पहिला राष्ट्रपति हुदा बिल क्लिन्टको पछि पछि हिड्ने हिलेरी अहिले उम्मेद्धार भए देखि नै पूर्व राष्ट्रपति बिल हिलेरीको पछि पछि हिडिरहेका छन् त खै कतै पूर्व राष्ट्रपति क्लिन्टन श्रीमतिको पछि पछि भनेर अमेरीकी अखबारमा समाचार छापिएको अहिले सम्म सुनिएको छैन ।
तसर्थ कसरी फोटो खिचियो भनेर विवाद गरेर दुनिया हसाउने काममा कोही मित्र नलगाऔं यो सिता दाहालको विरोधका नाममा महिलामाथिको अपमान समेत सावित हुन्छ ।
अमेरीकी पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिन्टन श्रीमति तथा राष्ट्रपति उम्मेद्धार हिलेरी क्लिन्टनको पछि हिड्दै । तस्वीर वासिङटन पोष्ट
प्रधानमन्त्री पत्नी सिता दाहालको तस्वीर विवाद महिला वा स्वास्नी भनेको त लोग्ने स‘ग मात्रै टासिने हो , उसले अरुको छेउमा फोटो खिच्न हुन्न भन्नु रुढीवादी सोचको परिणाम बाहेक अरु के होला ?
भोली सिता दाहाल थला परिन र प्रचण्डले आफ्नै हातले जाउलो पकाएर खुवाए भने पनि शायद नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अखबारमा समाचारको स्थान पाउछन् होला ।